လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း သပိတ်စခန်း ဖြိုခွင်းမှု၌ ဒဏ်ရာရသံဃာများကို တောင်းပန်ရန်နှင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ထိုးစစ်ဆင်မှုများကို ရပ်တန့်ရန် ကရင်ပြည်နယ်၊မြ၀တီမြို့ တွင် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်-ဒီကေဘီအေ ဦးဆောင်၍ ယနေ့မနက် ၇နာရီကျော်တွင် ဆန္ဒပြခဲ့ကြ သည်။
အဆိုပါ ဆန္ဒပြမှုတွင် ဒီကေဘီအေအပြင် ဗိုလ်မှူးချုပ် စောထိန်မောင်၏ KNU/KNLA ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ တပ်ဖွဲ့များလည်း ပါဝင်ပြီး စစ်ယူနီဖောင်းများနှင့်အတူ ကားအစီး ၁၀စီး၊ လူအင်အား ၈၀ ဖြင့် လက်ပံတောင်း တောင် စီမံကိန်း သပိတ်စခန်း ဖြိုခွင်းမှု၌ ဒဏ်ရာရသံဃာ တော်ပုံများ၊ စာတမ်းများ ကိုင်ဆောင်ကာ မြ၀တီမြို့ တွင် လှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဆန္ဒပြမှုကို ဒီကေဘီအေ အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူး စောဆန်းအောင်က "မြန်မာနိုင်ငံမှာ အထူးသဖြင့် လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းမှာ ဒဏ်ရာရ သံဃာတော်တွေကို အစိုးရအနေ နဲ့ ပြန်တောင်း ပန်ဖို့ပါ။ နောက် ကချင်ဒေသဘက်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ပွဲတွေကို ရပ်တန့်ပေးဖို့ပေါ့"ဟု ကေ အိုင်စီသို့ ပြောသည်။
၎င်းတို့၏ တောင်းဆိုမှုများကို မြ၀တီမြို့နယ်ထဲတွင် လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင် မြန်မာအစိုးရတပ် တပ်မ(၇၇) တပ်မမှူးက လက်ပံတောင်း တောင် စီမံကိန်း၌ ဆန္ဒပြသူများကို အကြမ်းနှိမ်နင်းခဲ့သည့် ရဲများကို အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု တုံ့ပြန်သွားသော်လည်း တစုံတရာ မလုပ်ဆောင်ပေးပါက ဒီကေဘီအေအနေဖြင့် ဆက်လက် ဆန္ဒထုတ်ဖော် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်မှူးစောဆန်းအောင် က ဖြည့်စွက်ပြောဆိုသည်။
ဒီကေဘီအေ ဆန္ဒပြပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ မျက်မြင်သက်သေ မြ၀တီမြို့ခံတစ် ဦးက "ဒီမနက် သူတို့ ဆန္ဒပြတာ မြ၀ တီမြို့ ဘုရင့်နောင်ဈေးကနေ ကြခတ်တောရကျောင်းလမ်းဘက်ကို သွားတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ သံဃာတော် များကို ပြည်လည်တောင်းပန်ဖို့ သူတို့တွေ ကြွေးကြော်ခဲ့ကြ တယ်။ မြို့ကို လှည့်ပြီး ဆန္ဒပြတာပေါ့။ နောက် ဆုံဆည်းမြိုင်ဘက်ကို သူတို့ ပြန်တက် သွား တယ်"ဟု ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း ဆန္ဒပြသပိတ်စခန်း ၆ ခုကို မြန်မာအစိုးရအာဏာပိုင်များက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့ရာ သံဃာတော် အပါး ၇၀ ကျော်နှင့် လူထု ၅၀ ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, December 14, 2012 Links to this post
ဟင်္သာတသတင်းထောက် ၂ ဦးသတင်းသွားရောက်ရယူရာတွင်ကူညီခဲ့သော ရွာသား ၂ဦးတရားစွဲခံရ
ဟင်္သာတနယ်ခံသတင်းထောက် ၂ဦးမှ လေးမျက်နှာမြို.နယ်၊ ၀က်ဆင်းအိုင်ကျေးရွာရှိ စပါးခွံဂက်စ်သုံးဆန်စက်၏ကျေးရွာအတွင်းရေဆိုးစွန်.ပစ်မှုများကြောင့် ကျေးရွာအတွင်း စိုက်ပျိုးမြေများ
တွင် ထိခိုက်မှုများရှိနေကြောင်း၊ ဒေသတွင်းကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုများရှိနေကြောင်းသတင်းရရှိသည်.
အတွက်သွားရောက်သတင်းရယူရာတွင် လိုက်ပါကူညီခဲ့သူများအား တရားစွဲဆိုခံရမှုများရှိနေကြောင်း
“ကျွန်တော်တို. တွေဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ.တုန်းက သတင်းသွားရောက်ယူခဲ့တဲ့အခါ ဒေသခံတွေက လိုက်ပါကူညီခဲ့ကြပါတယ်။ သတင်းတွေကိုမေးမြန်းအပြီး ဆန်စက်အပြင်ကဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တို.တွေနဲ.အတူရွာခံတွေရှိ်နေတုန်းကတော့ ပိုင်နက်အတွင်းဝင်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။ အခုတရားစွဲ ခံရတယ်ကြားပြီး ဒေသခံတွေကိုမေးတော့ သူတို.လည်းဝင်ခဲ့တာမရှိဘူးလို.ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေ ကိုလည်း သူများ ပိုင်နက်အတွင်း မ၀င်ဖို.နဲ. စကားတွေမလွန်ဖို.ပြောခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော်တို.ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်း မှာ ပုဒ်မ ၂ ခုနဲ.တရားစွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြားရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။”” ဟု ဟင်္သာတနယ်ခံသတင်းသမားကပြောသည်။
အဆိုပါ တရားစွဲဆိုခံရမှုတွင် လေးမျက်နှာမြို.နယ်၊ ၀က်ဆင်းအိုင်ကျေးရွာရှိဒေသခံ ဦးခင်နှင့်ဦးချစ်မြိုင် တို. ၂ဦးအား မိဘမေတ္တာ ငါးပုံဆန်စက်ပိုင်ရှင် ဒေါ်မ၀င်းက လေးမျက်နှာမြို.နယ်တရားရုံးသို. ဦးတိုက်လျှောက်ထား ရာ ပုဒ်မ ၄၄၇/ ၅၀၆ ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံရကြောင်း ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ.တွင် တရားစွဲဆိုခံရသူ ကာယကံရှင်များမှအကြောင်းကြားစာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ရုံးချိန်အား ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ.တွင်ချိန်းဆိုထားကြောင်းလည်း သိရပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, December 13, 2012 Links to this post
ကသာမြို့နယ်အတွင်း မိန်းမပျိုများ အကြောင်းမဲ့ ပျောက်ဆုံးလျှက်ရှိ
ကသာမြို့နယ်အတွင်း မိန်းမပျိုများ အကြောင်းမဲ့ ပျောက်ဆုံးလျှက်ရှိ၊ဒီဓါတ်ပုံရှင်အား တွေ့ရင် အကြောင်းကြားပေးကြပါ(ဟာဂျူလီ-ကသာ)
ကသာမြို့ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်နေ မမေသက်ဇွန်သည် ၁၂၊၁၁၊၁၂ရက်နေ့ မနက်က အကြောင်းမဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါသည်၊ထိုမိန်းကလေးမှာ အသက်၂၄နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး စက်ချုပ်မှုအလုပ်လုပ်
ကိုင်သူဖြစ်ကြောင်း ၄င်း၏မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ခင်နန်းမြင့်မှ ကျွန်တော့်ထံ ဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်၊
“ကျွန်မသမီးလေးက ကျွန်မနဲ့ အတူနေလို့ ရည်းစားမရှိတာ ကျွန်မသိပါတယ်၊တကယ်လို့ ရည်းစားနောက်လိုက်သွားရင်လည်း အခုဆို (၁)လရှိနေပါပြီ၊သတင်းတစ်ခုခုတော့ ကြားရမှာပေါ့၊
အခုလို ရုတ်တရက် ဘာသတင်းမှ မကြားရဘဲ စုန်းစုန်းမြုတ် ပျောက်သွားတော့ ပိုစိတ်ပူနေ ရပါတယ်၊သမီးလေးပျောက်သွားတဲ့နေ့က စက်ချုပ်ပစ္စည်းတွေလည်းပါသွားတယ်၊သူ့ဆိုင်ကယ်ကို လည်း ပေါင်သွား တယ်၊သူဆိုင့်ကယ်သွားပေါင်တဲ့ မိတ်ဆွေကပြော တာတော့ မေသက်ဇွန် ဆိုင်ကယ်လာပေါင်တဲ့ အချိန်မှာ ကသာမြို့ခံမဟုတ်တဲ့ မျက်နှာစိမ်းတစ်ယောက်ပါလာတယ်တဲ့၊နောက်ပြီး ဗန်းမော် သွားတဲ့ ကားလမ်း၊ငါးအိုးရွာမှာလည်း မေသက်ဇွန်ကို အဲဒီမိန်းကလေး နဲ့ပဲ တွေ့တဲ့သူ ရှိတယ်တဲ့၊ဒီတော့ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ လူကုန်ကူးခံလိုက်ရပြီလားလို့ တွေးမိပါတယ်”ဒေါ်ခင်နန်းမြင့်ပြောခဲ့ သည့် ဖြစ်စဉ်မျိုးမှာ ၂၀၁၀ခုနှစ်ကလည်း အင်းတော်မြို့တွင် ဖြစ်ဖူးခဲ့ ပါသည်၊မြို့ခံမိန်းကလေးများကို ဆေးတိုက်ပြီး လူကြီးများ မသိအောင် အ၀တ်အစားယူစေ၍ တရုတ်နိုင်ငံ သို့ခေါ်ဆောင် ရောင်းချ ခဲ့ သည့် ဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပါ သည်၊ထိုဖြစ်စဉ်အား ကျွန်တော် မှ ဖေါ်ထုတ်ရေးသားခဲ့ရာ လူကုန်ကူးခဲ့သည့် တရားခံ များအားလုံး ထောင်(၁၀)နှစ်ကျခံလိုက်ရပြီးဖြစ် ပါသည်၊
ယခုပျောက်ဆုံးသွား သည့်ဖြစ်စဉ်မှာ ယခင်အင်းတော်မြို့တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သောခြေရာလက်ရာ အတိုင်းဖြစ်နေပါသောကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူ၏ စိုးရိမ်မှုမှာ အပြစ်ဆိုစရာမရှိပါ၊
၁၂-၁၂-၂၀၁၂ နေ့ ညနေ ၆း၃၀ နာရီ တွင် ကလေးဆေးရုံ သို့ရောက်ရှိလာသော လက်ပတောင်းမီးသင့်ကလေးများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သွားရောက်ကြည့်ရှု
"ယနေ့ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် သံဃာတော်များ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မူ ( သတင်း ဓါက်ပုံများ)
ပြည်မြို့ မှ သံဃာတော်များ ဗိုလ်ချုပ်ကျောက်ရုပ် ရှေ့မှာ ဆန္ဒစတင်ထုတ်ဖော်နေပါပြီ
မန္တလေးတွင် သံဃာတော် အပါး ၁၀၀၀ ခန့် ဆန္ဒပြ
ယနေ့ ပခုက္ကူ သံဃာထု လမ်းပေါ်ထွက်၍ ဆန္ဒဖော်ထုတ်
ယနေ့ နေ့လည် ၁ နာရီ မှ စတင်ကာ ကလေးမြို့ရှိ သံဃာတော်များ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်
မုံရွာမြို့တွင် ဆရာတော်သံဃာတော် အင်အား(၇၀၀)ခန့်ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ဆူလေဘုရားရှေ့တွင် သံဃာတော်များ ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ဓာတ်ပုံများအား အင်တာနက်စာမျက်နှာ မှကူးယူဖော်ပြပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, December 12, 2012 Links to this post
လူ့အခွင့်အရေးနေ့အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မိန့်ခွန်း
အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လူ့ အခွင့် အရေးနေ့ အထိမ်း အမှတ် ရန်ကုန်မြို့ အင်းလျားကန် ဟိုတယ်မှာ ကုလ သမဂ္ဂ ကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနားကို သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တက်ရောက် ခဲ့ကြ ပါတယ်။
အများနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အလုပ်တွေမှာ အားလုံး ပူးပေါင်း ပါဝင်ခွင့် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် နဲ့ ကျင်းပတဲ့ ဒီနှစ်ပွဲ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လူ့ဂုဏ် သိက္ခာအတွက် အပြန်အလှန် ပြောဆိုခွင့်တွေ ရှိဖို့လိုတယ်၊ တဖက်ကပြောတာကို နားထောင်ဖို့ အရေးကြီးတယ် ဆိုတာ အဓိက ပြောသွားခဲ့ ပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစား လိုက်နာ တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အမြင် အယူအဆကို ပြောရုံနဲ့ မပြီးဘဲ တခြားလူတွေရဲ့ အမြင်ကိုလည်း နားထောင်ဖို့ လိုကြောင်း၊ အဲဒီလို နားထောင်တာ၊ သူများ အမြင်ကို နားလည်အောင် ကြိုးစားတာ၊ အလေးထား တာတွေ မရှိလျှင် လူ့အခွင့်အရေးကို ခိုင်ခိုင်မာမာ တည်ဆောက်လို့ မရနိုင်ဘူးလို့ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က ပြောသွားတာပါ။
လူသိများ ထင်ရှားသူ မဟုတ်တဲ့ သာမန် လူတွေရဲ့အမြင်ကိုလည်း လူအများ သိအောင် ပြောနိုင်ဖို့ လိုကြောင်းနဲ့ အဲဒီလို ဖြစ်လာဖို့ ပညာရေး အရေးကြီးတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ကတော့ တချိန်က နိုင်ငံတကာက လက်ညိုးထိုး အပြစ်တင် ခဲ့တဲ့ မူဝါဒတွေကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ လက်ထက်မှာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ နေပုံကို ခြုံငုံ ပြော သွားခဲ့ပါတယ်။
၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မတ်လက စပြီး ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးတာ၊ လူအများကို နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်ထဲမှာ ပါဝင် နိုင်အောင် ဆောင်ရွက် ပေးတာ အပြင် သတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် အတွက်လည်း ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ကြောင်း ဦးအောင်မင်းက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကချင်ဒေသမှာ ပဋိပက္ခတွေ ပြန်စခဲ့ တာကြောင့် ၁၇ နှစ်လုံးလုံး တည်ဆောက် ခဲ့ကြတဲ့ နှစ်ဘက် ယုံကြည်မှု ပျက်ပြားသွား ခဲ့ရတာကို ပြောရင်း နိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေး အတွက် လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆို ဆွေးနွေးခွင့် ရှိရမယ်လို့လဲ ဦးအောင်မင်းက ဆိုပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, December 11, 2012 Links to this post
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်၊ ကနီအုပ်စု၊ ဆားတောင်ပုံကျေးရွာရှိ မူလတန်းကျောင်းလေးမှ ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးဇေယျဆိုသူသည် နိုင်ငံဝန်ထမ်း၊ နိုင်ငံအနာ ဂတ်လေးတွေ ကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးတဲ့ဥယျဉ်မှူးကျောင်းဆရာဆိုတဲ့ ဂုဒ်ပုဒ်နဲ့ တစက်မှကို မတန်ပါ ဘူး။ နိုင်ငံအနာဂတ်ခေါင်းဆောင်လေးတွေဖြစ်လာမဲ့ ကလေးတွေကို စာသင်ပေးတဲ့ ဆရာတဲ့ဗျာ ...တိုင်းပြည်အတွက်တော့ရင်နာစရာပါပဲ....အဲ့ရွာလေးမှာ သူမူလတန်းကျောင်းအုပ် အဖြစ်နဲ့စရောက်က တည်းက တရားမ၀င် သုံးလုံးထီလောင်း ကစားဒိုင်လုပ်စားပါ သတဲ့...ဒါကို ကျေးရွာ လူကြီးတွေနဲ့ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့က ခေါ်ပြောပေမဲ့လည်း ဆက်လုပ်တာ ပါပဲ..။ နောက်ဘယ်လိုမှမတတ်သာတဲ့အဆုံး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့အဖွဲ့ သူ့အိမ်ကိုဝင်ရှာပြီးဖမ်း လိုက်တော့တာပေါ့.အဲ့မှာဖမ်းတော့ ခုပုံထဲမှာတင်ထားတဲ့ သုံးလုံးထီစာရွက်စာတမ်းတွေ အသုံးပြုတဲ့ဖုန်းတွေ ဘာတွေကို ဖမ်းမိတာပေါ့..အဲ့လိုလည်းဖြစ်ရော ကျောင်းအုပ်ကြီးက “ဒီဟာတွေကို ပင်လယ်ဘူးရဲစခန်းအပ်ပြီးအမှုမဖွင့်ပါနဲ့...ကျနော် ကျောင်းအုပ်အဖြစ်ကနေ နှုတ်ထွက်ပေးပါမဲ့ ..နှုတ်ထွက်စာတင်လက်မှတ်ထိုးပါ့မယ်လို့ပြောပါတယ်” ဒါပေမဲ့ ခုချိန်ထိ နှုတ်ထွက်ခြင်းလည်းမရှိတဲ့အပြင် ကျွန်းသစ်တွေခိုးခုတ်ပြီး သစ်စက်လည်တဲ့လုပ်ငန်းပါ ထပ်လုပ်လာပါတော့ တယ်..ဒါ့အပြင်ပုံထဲမှာ ပါတဲ့ နိုင်ငံတော်က အခမဲ့ပေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေကိုပါ ငွေကြေးနဲ့ရောင်းချပြီး အလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ အဆင့်ပါရောက်လာတယ်... သူ့နေရာမယ် အရပ်သားတခြားလူ တယောက်ဆို ရင်တော့ ပြောမိမှာမဟုတ်ဘူး...ခုဟာက သူလိုကျောင်းဆရာတယောက်က လုပ်တာဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျောင်းအတွက်လည်းမကောင်း ရွာအတွက်လည်းမကောင်း လို့ ပြောတာ ပါ..။ နောက်ဆုံး ဘယ်လိုမှ ပြောမရတဲ့အဆုံးတော့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရယ်....မြို့နယ်ပညာရေးမှူးဆီရယ်ကို ၀ိုင်းဝန်းပြီးတိုင်တန်းကြပါတယ်...အဲ့ကျမှပိုဆိုးတော့တာ..လုံးဝအရေးမယူပေးခဲ့ပါဘူး။ အဲ့တော့ ဦးဇေယျက ပိုဆိုးသွားပြီပေါ့ အရက်မူးပြီး ရွာထဲကိုပါစိန်ခေါ်တဲ့အထိဖြစ်လာတယ်..ဒါနဲ့မဖြစ်တော့ပြန်ပြီးဆိုပြီး (ကျနော်တို့ကတော့ဘာမှဗဟုသုတလည်းမရှိတော့ အစိုးရအဖွဲ့ကိုဘယ်လို စာရေးရလည်းဘယ်လို လိပ်မူရလည်းဆိုတာလည်းမသိပါဘူး သိသလိုပဲရေးလိုက်တာ) နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူးကို ထပ်တိုင်ကြတယ်..အဲ့မှာ နေပြည်တော်က စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရောက်လာတယ် ခေါင်းဆောင်က ဦးခင်မောင်အေး တဲ့ ဘာအဆင့်လဲတော့မသိပါဘူး။ သူတို့က ရွာသူရွာသားတွေ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ ရပ်မိရပ်ဖတွေ ကို နေ့ည မပြတ်စစ်ကြဆေးကြနဲ့ပေါ့..ဒါပေမဲ့ ထူးဆန်းတာ ကျန်တဲ့လူတွေ ကိုလျှောက် စစ်ဆေးပြီး ကျောင်းအုပ်ကြီးဦးဇေယျကိုတော့ လုံးဝမစစ်ဆေးပါဘူး..အဲ့လိုနဲ့ တရက်တော့ နေပြည်တော် ကအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်အေးက “နေပြည်တော်က အရေးကြီးဖုန်းဝင်လာတယ်..ခုပြန်ရမယ်” ဆိုပြီး ပြန်သွားကြရော။ ကျောင်းအုပ်ကြီးဦးဇေယျကိုတော့ အရေးယူဖို့နေနေသာ လက်ဖျားနဲ့တောင် တို့မသွားကြပါဘူးခင်ဗျား...၊ အဲ့မှာ ဦးဇေယျက ပိုသောင်းကျန်း လာတော့ တာပဲ အရက်တွေနေ့တိုင်းမူး..မူးပြီးရွာထဲမှာ “မင်းတို့ကောင်တွေဘာ တတ်နိုင်သေးလည်း...တိုင်ချင် ရာတိုင်...ငါကမပြုတ်ဘူး..ကုတ်နဲ့ကော်ထုတ်တောင်မပြုတ်ဘူး၊ ငါ့နောက်မှာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးနဲ့...နေပြည်တော်က ဦးခင်မောင်အေးရှိတယ်ကွ...ရှင်းလား” ဆိုပြီး မကြားဝံ့မနာသာတွေကို ကျောင်းဆရာတယောက်နဲ့မတန်အောင်ပြောဆိုကြိမ်းမောင်းနေတော့တာပါဘဲ.. အဲ့တော့က သူ့အနေနဲ့ဘာပဲလုပ်လုပ် လုပ်လို့ရသွားပြီ...ဥပဒေဆိုတာ သူ့အောက်ရောက်သွားပြီ သူလုပ်သမျှကို ရွာသားတွေက လည်စင်းခံကြပေတော့ပေါ့လို့.....
(အဲ့ဒီ ဆားတောင်ပုံကျေးရွာမှာနေတဲ့ ကျေးရွာသား)
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, December 09, 2012 Links to this post